“Hubeynta Qabaa'ilka Libya Waxay Abuuraysaa Soomaaliya cusub” - Jigjiga Online
HomeSomalida“Hubeynta Qabaa’ilka Libya Waxay Abuuraysaa Soomaaliya cusub”
Tripoli (JO) – Madaxweynaha Aljeeriya, Cabdelmajid Tebboune, ayaa sheegay inuu ka xun yahay in “la hubeeyo qabiillada Libya”, sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta Carabta.
Wuxuu madaxweynaha sheegay in “arrintaas ay sii xumeyn doonto xaaladda Libya ayna abuuri doonto mid la mid ah dhibaatada Soomaaliya”, sida lagu qoray warbaahinta Middle East Monitor.
Madaxweyne Cabdelmajid Tebboune ayaa sheegay in dalkiisa uu hayo xal fiican oo lagu soo afjarayo qalalaasaha Libya. “Qorshahaas waxaa aqbalay Qaramada Midoobey waxaana la gudbin doonaa iyadoo lagala shaqeynayo Tunisiya”.
Hadalkaas wuxuu madaxweynaha ka sheegay wareysi uu siiyay warbaahinta gudaha Aljeeria, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu.
Madaxweynaha Aljeeriya ayaa sheegay in dalkiisa uu diidan yahay in hub la siiyo qabiillada Libya, isagoo yiri: “Waxaa maqlayay maalintii la soo dhaafay in hub la siinayo qabiillada Libya si ay isu difaacaan, tallaabadaasna waa halis, waxaana arki doonnaa Soomaaliya cusub oo aan xal loo heli doonin.”
Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya, Sabri Boukadoum, ayaa muujiyay sida dalkiisa ay uga go’an tahay sidii xal waara looga gaari lahaa qalalaasaha Libya iyadoo loo marayo wadahadal, lana dhowrayo madaxbannaanida iyo sharafta dalkaas.
Boukadoum wuxuu sheegay in Aljeriya ay fileyso “in sida ugu dhaqsaha badan loo soo celiyo xasilloonida Libya iyadoo shacabka Libya ay u madaxbannaan yihiin go’aankooda”.